Pirasdantii filame Joe Biden Gov. Iowa duraani Tom Vilsack yeroo lammaatif U.S Agriculture Secretary | KWIT
Oromo News 12.10.2020
Namni haarawa qabame 2,246 kan tau yoo tau, waliigalatti namni qabame 250,000 dha. Haatau male, namni hospitaala galuufi haarawa qabama dhufu xiqqaatu jira. Ogeessi seeras Thanks giving booda kan jijjiiru akka taes abdii qabu. Wanti nama yaadechus ayyaana ganaa fi bara haarawa tauu akka qabu himan.
Manni fayyaa Siouxland akka gabaaseti seaati 24 keessati namni haarawa corona virus qabame 107 dabalamuun gabaafame. Woodbury County keessati babalinni corona virus akkuma gudattaa deemu jira.
Manni fayyaa siouxland MercOne fi UnityPoint Health-St. Luke’s Covid-19 irrati qarqaarsa dabalataa busniss community gaafatan. Manni fayyaa hojattooni busnissa hunduu haguugi fuula godhachuun akka qarqaaran himan.
UnityPoint har’a akka jedheti guyyaa har’a hojattoota isaatif kafalti xiqqaa kan kafalamuf kara $15 seeatin akka kenamu himan. Kafaltiin kun kan dabalame hojii irra kan oolu January irraayi. Hojattooni mannen keesa dalagu, kan nyaata dalagan, narsoota fi seera clinical kan qarqaaran fayadamaa kan ta’aniidha.
Sababa corona virus murtii Cristhian Bahena Rivera gara jia itti aantu dabarsanii jiru.
Bahena Rivera bara 2018 keessati barata university Iowa Mollie Tibbets ajjeeste jedhe kan hidhameedha.
Murtiin January 25th Scott County Corthouse kan jalqabamu jedhe kan fudhatame tura garuu amma gara May 17th siisame jira.